ခုတစ်လော ပို့စ် ရေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားမိပါတယ်....
ဒါပေမယ့် တစ်ခုမှ ပြီးမြောက်အောင် မရေးဖြစ်ဘူး........
လူက ပုံမှန်မဟုတ်သလို ခံစားနေရတယ်..................
နေ့စဉ်ထိတွေ့နေတဲ့ အရာတွေက ကိုယ့်နဲ့ တစိမ်းပြင်ပြင်တွေလိုပါပဲလား .......
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်ရမှန်းလည်း မသိ......
တစ်ယောက်ယောက်ကို စကားပြောရင် သက်သာမလားဆိုပြီး ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့လည်း
ဘာပြောရမှန်းမသိ ? ? ?
တစ်ခုခုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေမယ့် အဆိုးဆုံးတွေ ဖြစ်နေသလိုပဲ........
တစ်ယောက်ယောက်ကို နားလည်မှုရအောင် ကြိုးစားတိုင်း ပိုပိုဝေးနေသလိုပဲ..........
တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတိုင်း စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေပဲ အဖတ်တင်နေသလိုပဲ...
လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားတိုင်း ကြိုးတွေက တင်းနေသလိုပဲ
တိုတောင်းတဲ့ လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ ဘာမှ အရေးမပါတဲ့ အရာတွေအတွက် ဘာတွေ ဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ပျက်မိတယ် .....
36033603 - March 13, 2009 at 7:35 PM
မ...ဒီနေ့မှမွှေနှောက်ရင်း မရဲ့ဘလော့ခ်ကို . ရောက်ရှိခဲ့တယ်..ရောက်ရောက်ချင်းရင်ထဲမှာဟာသွားခဲ့ရ တယ်...ဒီရက်ပိုင်းအဆင်မပြေမူ့တွေများနေတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ခံစားချက်ခြင်းတူညီနေလို့ မ..ကိုကိုယ်ချင်းစာမိတယ်...ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဖြေတဲ့ တဲ့နည်းလေးကို ဝေမျှလိုက်တယ်..ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ တရားစာအုပ်သော်လည်းကောင်း တရားခွေသော်လည်းကောင်းနာကြားကြည့်ပါ..မ..စိတ်နှလုံး
MTZO - March 26, 2009 at 3:59 PM
“ဖြစ်ပြီးအဟောင်း ၊ တိတ်ဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစား ၊ မငြီးတွားနှင့်။ နောင်ခါဖြစ်လတ် ၊ အနာဂါတ်ကို ဇာတ်ကြောင်းတွေးတော ၊ စိတ်မမောနှင့်။ ဖြစ်ဆဲဧကန် ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကို ဝေဖန်ဥာဏ်ရှု ၊မျှတမှုဖြင့် ပူမှုကင်းစွာ ၊ နေစမ်းပါလော့။ သို့ပါလေမှ ၊ သင့်ဘ၀၀ယ် ဒုက္ခကင်းစွာ ၊ ချမ်းသာလာလိမ့်။”
ourstream - April 4, 2009 at 4:41 PM
တခါတလေတော့လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်...။ အဝေးမှာနေတဲ့ လူတွေမို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်..။
You are viewing "ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိ"